Tag: tsvakurudzo yemusika | Martech Zone
Tag: kutsvagisa musika
Birdie: AI-Inotungamirwa Kutsvaga Kwemusika
Chitatu, September 2, 2020 Chitatu, September 2, 2020 Douglas Karr
Iyo firehose yedata iyo yemagariro midhiya inogona kupa haina kurongeka uye yayo yakaoma kuwana ruzivo rwakakosha kubva mairi pasina imwe mhando yehungwaru. Birdie anoshandura mamirioni ezvekutaura, wongororo, uye dzimwe hurukuro dzepamhepo kuita yakarongeka, inoshanda mutengi ruzivo rwunobatsira zvikwata zvekushambadzira kuita nekukurumidza, nekubudirira sarudzo. Birdie ndiye indasitiri yekutanga yakazara yakazara yeAI-based Insights-as-a-Service (IaaS) chikuva chakagadzirirwa zvakanangana nekubatsira maCPG zvigadzirwa senge Samsung neP & G vanzwisise mamirioni emaonero evatengi, achichinja
Kunyangwe vatengi nevatengesi zvakafanana vachidoma paseti yekuunganidza data seichi kukura sosi yevatengi ruzivo, vangangoita zvikamu zviviri kubva muzvitatu vanoti havasi kuzoshandisa passive dhata makore maviri kubva zvino. Kutsvaga uku kunobva kutsvagurudzo nyowani yakaitwa neGfK uye iyo Institute for International Research (IIR) pakati pevanopfuura mazana manomwe vatengi vekutsvagisa musika nevatengesi. Chii chinonzi Passive Data Unganidzo? Passive data muunganidzwa ndiko kuunganidzwa kwevatengi dhata kuburikidza nehunhu hwavo uye kudyidzana pasina kushingairira
Iyi infographic kubva kuNew Jersey Institute of Technology inoratidza iyo Dhata Mining uye Sarudzo Sisitimu Yekutsigira, ichitsanangura mana mana maitiro akasiyana mukati meiyo yakazara system. Data Management - inounganidza ruzivo rwunowanikwa nekambani kubva mukutengesa kwavo, zvinyorwa, uye mishumo yevatengi. Model Management - kuyedza kugadzira mhedziso kubva kuripo bhizinesi marongero ekuona kana ivo vari kubudirira. Ruzivo Injini - inotaridzika kugadzira maparagidhi matsva ekuti aenderane nemaitiro.
Mikana ndeyekuti kana iwe uri kuverenga Martech Zone, iwe unotoziva kukosha kwekuitisa kutsvagisa kwemusika kune chero zano rebhizinesi. Kuno kuSurveyMonkey, isu tinotenda kuti kunyatso zivikanwa pakuita sarudzo ndicho chinhu chakanakisa chaungaitira bhizinesi rako (uye nehupenyu hwako, zvakare!). Ongororo dzepamhepo inzira huru yekutsvagisa musika nekukurumidza, nyore, uye nemutengo zvinobudirira. Hedzino nhatu nzira dzaunokwanisa kuzviisa mubhizinesi rako